नायब सुब्बाहरुले सिंहदरबारभित्रै गरे प्रदर्शन, के हुन् माग ? - Yessamachar
नायब सुब्बाहरुले सिंहदरबारभित्रै गरे प्रदर्शन, के हुन् माग ?
निजामती सेवा ऐनप्रति असन्तुष्ट जनाउदै नायब सुब्बाहरुले मंगलबार सिंहदरबारभित्रै प्रदर्शन गरेका छन् । मंगलबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नजिकको सडक किनारमा उभिएर सुब्बाहरुले प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेका हुन् ।
उनीहरुले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत सरहको पदपूर्तिमा ५० प्रसतशत खुल्ला, ३० प्रतिशत बढुवा र २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनु पर्ने माग राखेका छन् । तर, कुनै पनि साविकको पदबाट अधिकतम १२ वर्षसम्म पनि बढुवा नभएमा स्वतः बढुवा प्रणालीबाट पदपूर्ति गरेर मात्र खुलातर्फ विज्ञापन गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन् । प्रस्तावित ऐनमा नायब सुब्बाबाट शाखा अधिकृतमा बढुवाका लागि २० प्रतिशत मात्र कोटा छुट्टाइएको छ । विरोध प्रदर्शनमा सहभागीहरुले राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित ऐन कर्मचारीको हितमा नरहेको भन्दै विरोध गरेको बताएका छन् ।
प्रदर्शनमा उत्रेका कर्मचारीहरुले निजामती सेवा विधेयकका कतिपय प्रावधानले नायब सुब्बाहरुको वृत्ति विकासमा असर परेको जनाएका छन् । देशभर राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी अर्थात नायब सुब्बा पदमा करिव ३५ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् ।
Previous articleआज हरिशयनी एकादशी, ओखतीय गुण भएको तुलसीको बिरुवा घर घरमा रोपिँदै
Next articleनौ वर्षमुनिका बालबालिकामा कोरोना सङ्क्रमण,६१ बालबालिकामा सङ्क्रमण देखियो